नेपाली लेख्न सिकाउने पुस्तक - Shikshak Maasik
नेपाली लेख्न सिकाउने पुस्तक
by • • पुष्तक समिक्षा • Comments (0) • 1243
निमार्ण, पुर्ननिर्माण, गर्भनर, प्राधिरकण, अन्र्तगत, आर्कषित, तथ्याकं… एकपटक यी शब्दहरु उच्चारण गर्नुस् त, सही छन् ? छैनन् । तर, हामी यस्तै शब्दहरू लेखिरहेका छौं । अझ हतारको साहित्य भनेर चिनिने पत्रकारितामा त झन् यस्तो गल्तीलाई हामी सामान्य रूपमा नै लिइदिन्छौं । हो, समाचार लेख्ने क्रममा हामी हतारमा हुन्छौं । पाठकलाई सकेसम्म छिटो सूचना पुर्याउनु पत्रकारको कर्तव्य पनि हो तर पाठकलाई हाम्रो हतारोसँग मतलब हुँदैन ।
हतारो, हेलचेक्र्याइँ, चलिहाल्छ नि भन्ने मानसिकता आदिका कारण हामी आफ्नै भाषा लेखनमा पछाडि परिरहेका छौं । हामीलाई सिक्नुपर्छ भन्ने तत्वबोध पनि भएको छैन । अंग्रेजी लेखनमा हामी बढी सचेत हुन्छौं तर आफ्नै भाषामा भने हामी त्यति गम्भीर छैनौं, जति हुनुपर्ने हो ।
आम सञ्चारमाध्यम भनेका एकैपटक लाखौं–करोडौं अडियन्स (पाठक, स्रोता, दर्शक)सम्म सन्देश पुर्याउने माध्यम हुन् । त्यसैले आमसञ्चार माध्यममा प्रयोग हुने भाषाशैली सरल र सबैले बुझ्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले कम्तीमा पनि सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्ने भाषा शुद्ध र सरल हुनैपर्छ ।
हामीकहाँ समाचारमा प्रयोग हुने भाषाशैलीका बारेमा बहस हुँदै नभएको पनि होइन । केही वर्षअघि बीबीसी नेपाली सेवाले पत्रकारिता भाषा पाठशाला भनेर एउटा सामग्री प्रस्तुत गरेको थियो । समाचारमा प्रयुक्त हुने भाषाशैलीबारे केही पुस्तक बजारमा नआएका पनि होइनन् । तर पनि अपेक्षित रूपमा भाषामा सुधार आएको छैन ।
यही चिन्ता र चासोलाई मध्यनजर गरेरै हुनुपर्छ, भाषाकर्मी शरच्चन्द्र वस्तीले ‘नेपाली कसरी लेख्ने ?’ नामक पुस्तक बजारमा ल्याएका छन् । हामी जसरी बोल्छौं, त्यसैगरी लेख्नुपर्छ भन्ने वस्तीको पुस्तक सञ्चारकर्मी कै लागि बढी उपयोगी हुने देखिन्छ । यद्यपि, उनले सबैखाले नेपाली लेखनका लागि प्रशस्त ‘टिप्स’ दिएका छन् ।
बोलीचालीको भाषा लेख्ने, छोटा वाक्य लेख्ने, प्रचलित र सजिला शब्द प्रयोग गर्ने, एउटा वाक्यमा एउटामात्र कुरा भन्ने– यो सबै समाचार लेखनमा लागू हुन्छ । कुनै पनि शब्दको प्रयोग गर्दा त्यसको अर्थ बुझेर मात्र गर्नुपर्छ भन्नेमा वस्तीले जोड दिएका छन् । शब्दको प्रयोगमा प्रायः कस्ता खालका असावधानी र गल्ती हुन्छन् अनि तिनलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्नेबारे ‘शब्द’ खण्डमा राम्रोसँग बताइएको छ । वाक्य गठनको विषयमा पनि पुस्तक उपयोगी छ । वाक्यमा प्रायः के–कस्ता कमजोरी हुन्छन् र तिनलाई कसरी सुधार्ने भन्नेबारे पनि पुस्तकमा स्पष्ट पारिएको छ
नेपाली कसरी लेख्ने ?
लेखकः शरच्चन्द्र वस्ती
पुस्तकको अन्त्यमा प्रायः गलत हिज्जे लेखिने शब्द र तिनको शुद्ध रूपको सूची समावेश गरिएको छ, जुन समाचार तथा अन्य सबै प्रकारको लेखनमा उपयोगी हुन्छन् । त्यसो त हरेकजसो सञ्चारमाध्यमका आ–आफ्नै शैली पुस्तिका हुन्छन् । हिज्जे र ह्रस्व दीर्घको पनि सर्वमान्य नियम छैन । केही समयअघि देखिएको नेपाली हिज्जेको भद्रगोल सल्टिएको भए पनि वस्तीको पुस्तकमा अझै पनि अलमलमा पार्ने शब्दहरु छन्, जस्तो– शहर, नजीर, नून, कानून, शहीद, गरीब आदि ।
नेपाली भाषामा कृत्रिमता थपिँदै गएको र भाषा बोधो, भद्दा र बिरानो बन्दै गएको भन्दै वस्तीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पुस्तकमा लेखनलाई कसरी राम्रो, मीठो, छरितो, तेजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उदाहरणसहित सिकाइएको छ । सामान्यतः ख्याल नगरिने तर ख्याल गरेपछि देख्न र देखेपछि निराकरण गर्न सकिने कमजोरीहरूबारे पुस्तकमा छलफल गरिएको छ । नेपाली लेखनमा रमाउन चाहने जो–कसैले पुस्तक पढेर आफ्ना कमजोरी थाहा पाई आफ्नो लेखन सुधार्न सक्छ ।
पुस्तक विशेषगरी समाचार तथा साहित्य लेखनमा सक्रिय तथा यो क्षेत्रमा आउन चाहनेहरुका लागि उपयोगी छ । यद्यपि, नेपाली लेख्नैपर्ने पेशा व्यवसायमा लागेका सबैलाई काम लाग्छ । पुस्तक लेख्ने क्रममा विभिन्न पत्रपत्रिका तथा नवप्रकाशित कृतिहरूको अध्ययन गरेको र त्यसले आफूलाई अनौठो अनुभव भएको लेखकले प्राक्कथनमा उल्लेख गरेका छन् । यही कुराले वस्तीलाई पुस्तक लेख्न घचघच्याएको हुनुपर्छ । आफूले १० वर्षअघि औंल्याएका कमीकमजोरी अहिले पनि उस्तै रहेको उनको निष्कर्ष छ ।
‘शिक्षक’ मासिकले प्रकाशन गरेको १४९ पृष्ठको पुस्तकको मूल्यः रु.३०० रुपैयाँ राखिएको छ ।
नेपाली भाषालाई प्रेम र सम्मान गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका वस्तीको यस अघि ‘हाम्रो भाषा’ नामक पुस्तक प्रकाशित छ ।
२०७४ भदौ १७ गते बाह्रखरी मा प्रकाशित